Samy ho eto ihany… | NewsMada
Par Taratra sur 13/12/2018
Nitondra fiovanabe teo amin’ny fiatrehana ny fifidianana, indrindra ny fampielezan-kevitra, ny fisian’ny tambajotra sosialy amin’ny internet. Fitaovana iray manan-danja io, hampitàna ny hevitra sy handresena lahatra ny mpifidy. Ny indro kely na mety ho olana lehibe mihitsy aza, ny tsy fahaizan’ny mpampiasa azy mifehy tena amin’izay soratany sy ataony kisarisary, hany ka mampanahy be ihany.
Toa hadinon’ny ankamaroan’ny mpanao « facebook » ny hoe ny hevitra anie no miady fa tsy ny olona e ! Ankehitriny mantsy, toa miitatrabe ny « tantara » ary mivadika fifandrafesana sy fifanalam-baraka, miaro ompa mihitsy. Ny mahavariana, ireo mpanao politika toa mahay mihavana ihany rehefa misy tombontsoa iraisany. Isika vahoaka kosa, zavatra tsy misy dikany, resaka tsy misy fotony kanefa mahatonga fofona.
Raha misy ny gidragidra eto amin’ny tany sy ny firenena, tsy kely lalana fa manan-kaleha, mahita tany iondranana foana ireo mpitondra. Ny madinika, ny samy valalabemandry, ny samy Malagasy mpifidy kosa, ho aiza ? Moa tsy samy ho eto ihany ? Ka raha tsy afa-miala fa samy ho eto ihany, tsy hisy intsony izany ny atao hoe fiarahamonina fa hiditra amin’ny samy maka ho azy ?
Malaza ho tsotra sy be fitiavana ny Malagasy, saingy, raha amin’ny resa-pifidianana iankinan’ny hoavin’ny firenena toa izao, angamba hisy fetra ihany ilay maha olon’ny fo antsika ka samy handeha am-pisainana. Ny fahafantaran’ny « sasany » io kilemantsika io no nanararaotany hatramin’izay. Nodomina tapany isika, avy eo tsy taitra akory nandoa erany… Toy izany hatrany.
Na iza na iza ho lany eo, tsy hisy mihitsy ny olona na sokajin’olona havakavahana na hatokana fa samy mbola ho eto daholo ihany. Tsy miankina amin’izay ho filoham-pirenena irery koa ny hampandroso na hampihemotra ity Madagasikara ity fa samy tompon’andraikitra ny olom-pirenena tsirairay; izany hoe samy mbola ho eto ihany isika. Ka raha samy ho eto ihany, tsy misy tokony hifandrafesana!